News - ဦး ထုပ်ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်သဘောထားတစ်ခုဖြစ်သည်
အဆောက်အ ဦး အပြင်အားကစား Caps
သိုးမွှေး ဦး ထုပ်
မာဂရက် Howell နွေ ဦး ရာသီ / နွေရာသီ 2020 လေယာဉ်ပြေးလမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖြူရောင်လှိုင်းတံပိုးများ၊ အလွန်ကြီးမားသောသံပုရာနှင့်စိမ်းရောင်ရှပ်အင်္ကျီများ၊ ပေါ့ပါးသောပန်းခြံများ၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဘောင်းဘီပေါ်ရှိခြေအိတ်များသည်လည်းမဆိုးလှပါ။ အများစုမှာ Flax bean ကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ဦး ထုပ် Gucci မှာလည်း Alessandro Michaele ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ် hyperrealism ကိုညသန်းခေါင်အချိန်မှာမှေးမှိန်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ ပဲမျိုးစုံ တက်ကြွစတုရန်းအရောင်များနှင့်တောက်ပသောနီယွန်အတွက် ဦး ထုပ်။
အဆိုပါ bean ကို ဦး ထုပ်ဦး ခေါင်းပတ်ပတ်လည်တွင်ပတ်တီးကဲ့သို့တင်းကျပ်စွာတွယ်ကပ်ထားခြင်းသည်တံငါသည်များနှင့်ပညာရှင်များအတွက်အသစ်အဆန်းမဟုတ်သော်လည်း“ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ” အနေဖြင့်ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီများတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ခဲ့သည်။ ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်သောဂျင်းဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ချွေးထွက်ရှပ်အင်္ကျီများ အသုံးပြု၍ ယခုတွင်၎င်းသည်လက်လုပ်ကာဒီဂျန်များသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်နာဝတ်စုံများဖြင့် ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ ဦး ထုပ်သည်ဖိနပ်ကဲ့သို့အဝတ်အစားအတွက်သတ်မှတ်ထားသည်ဟုသူမကဆိုသည်.
beanie ဦး ထုပ်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်လူကြိုက်အများဆုံး ဦး ထုပ်တစ်ခုဖြစ်လာရန်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးလူအများစုအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရွယ်အစားပြissuesနာများမရှိပါ။ အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်လေးနက်သောဖက်ရှင်ပုံစံများသည်ချုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်စည်းကမ်းမဲ့သောရောနှောခြင်းများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ဝတ်စုံများသည်ငြီးငွေ့စရာမဟုတ်တော့ဘဲလူတိုင်း၏စိတ်ခံစားချက်များအတွက်ပတ္တူဖြစ်သည်။ ဝတ်စုံနှင့်အတူ beanie ဦး ထုပ်သည်ရှစ်အင်္ကျီအစားရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ဖြင့် 80-Armani ဝတ်စုံနှင့်တူသည်။ လည်စည်း။
beanie ဦး ထုပ်များသာမကလှိုင်းအသစ်များကိုကြည်ညိုလေးစားသော Chanel ၏ကျောင်းမှမိန်းကလေးပုံစံသည်လဲကျနေသော corm များပါ ၀ င်သည့် ဦး ထုပ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ Wave Wave ရုပ်ရှင်များသည်ပြင်သစ်အမျိုးသမီးများ၏ထူးခြား။ မြဲမြံသောရှုထောင့်ကိုပေးသည်။ Pixie ဆံပင်၊ မျက်လုံးပြစက်၊ ဦး ထုပ်တစ်ထည်ပေါ်တွင်အနီရောင်ပန်းပွင့်ကြီးတစ်ခုသို့မဟုတ် Brittany အစင်းနှင့် miniskirts များကိုဝတ်ဆင်ခြင်း။1 အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၏နှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ New York၊ London, Milan နှင့် Paris ရှိ runway များနှင့်အတူရာသီအလိုက် ၀ တ်စုံရာသီသို့ ၀ င်နိုင်သည့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အပိုင်းများဖြင့်လွှမ်းမိုးထားသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဗီရိုကိုရေရှည်တည်တံ့စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် "နူးညံ့သော ၀ တ်ဆင်ခြင်း" ကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်စိတ်ခံစားမှုနှင့်စတိုင်လ်အမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
၁၉ ရာစုနှင့် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသူများအပါအ ၀ င်လူမှုအဆင့်အတန်းအမျိုးမျိုးမှလူများသည် ဦး ထုပ်ကို ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီလူကြီးလူကောင်းတစ် ဦး ဦး ထုပ်မဝတ်ရန်မသင့်တော်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။ ဦး ထုပ်များ၏အမည်များမှာလည်းဖြစ်သည်။ ဇာတ်ကောင်များနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များကြွယ်ဝသည်။ Bowler ဦး ထုပ်သို့မဟုတ်ဒါဘီ ဦး ထုပ်သည်ဇောက်ထိုးအိုးတစ်လုံးကဲ့သို့ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီး ၁၉ ရာစုဗြိတိသျှ Earl ၏နာမည်ကိုခံယူထားသည်။ Fedora ကိုနာမည်တူပြဇာတ်ဖြင့်နာမည်ပေးထားသည်။ ပတ်ပတ်လည်အပေါ်ပြန်လှန်နိုင်သည့် rounded top နှင့်ကျယ်ပြန့်သောအနားသတ်နှင့်အတူပျော့ပျောင်း ဦး ထုပ်။ ဒါဟာလူကြီးလူကောင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်, မိုagainst်းရွာစေခြင်းငှါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့်လည်းတက်ခေါက်နှင့်လက်ဆွဲအိတ်တစ်ခုထဲသို့ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ လူထဲ “Casablanca” အတွက်ပုဂ္ဂလိကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးရန် “The Big Sleep”နယူးယောက်လမ်းတွေပေါ်မှာတုတ်ကျင်းတွေဖုံးပြီးအနက်ရောင်နဲ့မီးခိုးရောင် Fedoras တွေ ၀ တ်ဆင်ထားတယ်။
စာရေးသူ Peter Mayer ကအမျိုးသား၏ ဦး ထုပ်သည်ဖက်ရှင်ကျပြီးကြော့ရှင်းသည်ဟုထင်မှတ်ကာလူတစ် ဦး ၏စရိုက်ကိုပြောခဲ့သည်။ "ဦး ထုပ်များသည်လူတစ် ဦး ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကဲ့သို့များသောအားဖြင့်နှာခေါင်းသည်လူတစ် ဦး ၏အသွင်အပြင်နှင့်တူသည်" ဟုသူက About Taste တွင်ရေးသားခဲ့သည်။
On " မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါဗြိတိန်" ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအိမ်ရှင်သည် Trump ည့်သည်အဖြစ် Trump ၏ Churchillian ဦး ထုပ်ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ မစ္စတာ Trump ၏ ဦး ထုပ်သည်အွန်လိုင်းလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ပေါ်စေပြီးသူ၏ဆံပင်များဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုစွပ်စွဲခံထားရသောအငြင်းပွားမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဆေးပြင်းလိပ်များ၊ လမ်းလျှောက်တုတ်များ၊ လေးနှင့်ချိတ်များနှင့်ရေကူးဝတ်စုံတစ်စုံသည် Churchill ၏အင်္ကျီများဖြစ်သည်။ သူ၏အမျိုးမျိုးသော ဦး ထုပ်များသည် ၁၉၂၀ တွင်ကာတွန်းသမားများအားပါတီပွဲတစ်ခုကျင်းပပေးခဲ့သည်။ ချက်ရီသည်ခဏတာစိတ်ဆိုးကာစာစီစာကုံးတွင်ရေးခဲ့သည် - ပြည်သူ့အရာရှိတစ် ဦး ၏ပစ္စည်းကိရိယာများသည်လူတိုင်းကိုရှာဖွေလေ့လာရန်နှင့်အသိအမှတ်ပြုရန်သင်ယူတတ်သည့်ထူးခြားသောအမှတ်အသားဖြစ်သည်။ Disraeli ၏နဖူး၊ Gladstone ၏ကော်လာ၊ Lord Randolph Churchill ၏မုတ်ဆိတ်၊ Chamberlain ၏မျက်မှန်၊ Baldwin ၏ပိုက်များ - ဤအရာများသည်အရေးကြီးသည်။ ဒီသင်္ကေတတွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ကာတွန်းသမားတွေက ၀ ယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ကျွန်တော့် ဦး ထုပ်တွေရဲ့ဒဏ္createdာရီပုံပြင်တွေကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ "
သူကရှင်းပြသည်မှာ ၁၉၁၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလတွင်ဖြစ်သည်။ သူသည် Southport တွင်သူ၏ဇနီးနှင့်အတူကမ်းခြေတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်နေခဲ့သည်။ ဒါကခန်းမထဲကစားပွဲပေါ်တင်ပြီးစဉ်းစားစရာမလိုဘူး။ ကျွန်မတို့လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါဓာတ်ပုံဆရာရောက်လာပြီးသူဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာကာတွန်းဆရာတွေနဲ့စာစီစာကုံးသတင်းထောက်တွေဟာကျွန်တော့် ဦး ထုပ်ကိုဘယ်လောက်အထိငြင်းခုံနေကြသလဲ၊ အတိအကျ; သူတို့ဘယ်လောက်ထူးဆန်းပုံသဏ္;ာန်; ငါဘာလို့ငါ့ရဲ့ ဦး ထုပ်ကိုပြောင်းလဲနေရတာလဲ၊ ငါသူတို့ကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်၊ စသည်စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကင်လုပ်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်ရုပ်ပုံပေါ်တွင်အခြေခံသည်။"
သို့သော် Churchill ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိဆရာပီတာ Mendelssohn က Churchill ၏အဖြစ်အပျက်သည်မှန်ကန်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ Churchill သည်ဝါဒဖြန့်ချိမှုတွင်အလွန်ကျွမ်းကျင်ပြီးသူ၏ ဦး ထုပ်နှင့်အခြားသူများ၏ခြားနားချက်ကိုသတိမပြုမိနိုင်ပါ။ ထိပ်တန်း ဦး ထုပ်မှအကျော်ကြားဆုံး Bowler ဦး ထုပ်သို့စတိုင်များစွာနှင့်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ Humboldt ဦး ထုပ်သည်အပေါ်မှလက်ချောင်းကဲ့သို့အခေါင်း၊ အလယ်၌ဆံပင်ကောက်ကောက်နှင့်ဖဲဖဲနံပါတ်ပါသောသိုးမွှေး ၀ တ်စုံပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဂျာမန်ဘုရင်အက်ဒွပ် (၇) မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၈၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက Bad Homeburg မြို့ကိုအင်္ဂလန်သို့ပြန်ပို့ခဲ့သည်။ Churchill ၌ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်လေလံတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၁၁၇၇၅ ဒေါ်လာဖြင့်လေလံတင်ရောင်းချခဲ့သည့် Humboldt ဦး ထုပ်အပါအ ၀ င်အနက်ရောင်ဖဲကြိုးများပါ ၀ င်သည့်အနက်ရောင်ဖဲကြိုးများနှင့်အနက်ရောင်ဖဲကြိုးများအထိဤ ဦး ထုပ်များစွာရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းအပေါ် Churchill ၏အတိုကောက်ဖောင်း။
ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီသည်သူ၏လတ်ဆတ်သော၊ ခေတ်မီသောပုံစံနှင့်ဆံပင်အထူနှင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲသည်။eအထူးသဖြင့်အများပြည်သူအတွက်အထူးသဖြင့်အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုတွင်၊ "Jacqueline Kennedy's Hat" သည်လွတ်လပ်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြားချပ်ချပ်ထိပ်၊ ရေတိမ်ပိုင်းမရှိ၊ တစ် ဦး Pillbox ။ ၎င်းသည်စစ်ရေးခေါင်းစီးမှဆင်းသက်လာသည့် Pillbox Hat ဟုလည်းလူသိများသည်။ ၁၉၆၁၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာသည်ကနေဒီသည် ၂၀ ရာစုတွင်ပထမဆုံးရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်တွင်ဖွင့်လှစ်သောမိန့်ခွန်းကိုပြောကြားခဲ့သည့်ပထမဆုံးအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာသည်။
သို့သော်အစီအစဉ်အရအရာအားလုံးမသွားခဲ့ပါ။ တစ်ညလုံးဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် ၀ ါရှစ်လက်မနှင်းကျခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ရာသီဥတုအေးသည့်ကာလများတွင် Jacqueline မှလွဲ၍ အခြားဂုဏ်သိက္ခာရှိသူများသည်ထူထဲသော mink ကုတ်အင်္ကျီများ ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ သူမ၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ဆန်သောသူသည်သူမ၏ရိုးရှင်းသောသိုးမွှေးအင်္ကျီကိုသူမအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်၊ ဂျက်ကီ၏နိုင်ငံရေးအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်စတိုင်အတွက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သာမဟုတ်ဘဲသမ္မတ၏ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်အကျော်ကြားဆုံးအသွင်အပြင်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဆေးသေတ္တာအဖုံးသည်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။.
Jacqueline က ဦး ထုပ်ကိုသိပ်မကြိုက်ဟု ဦး ထုပ်များကိုမကြိုက်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ဦး ထုပ်၏ဒီဇိုင်းပညာရှင်ဟယ်လ်စတန်သည်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်အချိန်ပိုအလုပ်လုပ်သည်။ Jacqueline ကိုမပေးမီသူသည်မိမိခေါင်းပေါ် တင်၍ ရှေ့နှင့်နောက်ဘက်မှန်များကြားတွင်ထိုင်ခဲ့သည် ထောင့်ပေါင်းစုံမှကြည့်။ ပြည့်စုံနေစေရန်သေချာအောင်လှည့် ထွက်၍ လှည့်သွားခဲ့သည်။ Jacqueline သည်လေထန်နေသဖြင့်သူ၏ ဦး ထုပ်ကိုထိလိုက်ပြီးရေတိမ်သွားသည့်အတွက်မည်သူမျှသတိမပြုမိဘဲကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ အထက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှကျေးလက်အနောက်ဘက်အနောက်ဘက်သို့ "အသွင်အပြင်ကိုကူးယူတဲ့လူတိုင်းက ဦး ထုပ်ထဲကိုချိုင့်ထဲမှာထွက်သွားတယ်" ဟုနောက်ပိုင်းတွင် Halston ကရယ်မောလိုက်သည်။
JFK လုပ်ကြံခံရသောနေ့တွင် Jacqueline သည် Raspberry- ပန်းရောင်ဝတ်စုံဖြင့်ပြားချပ်ချပ်ဖြင့်အပြည့်ပါသောငွေတံဆိပ်ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ သွေးစွန်းသောဝတ်စုံကိုမေရီလန်းပြည်နယ်ရှိအမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက်တွင်သော့ခတ်ထားပြီးအများပြည်သူမြင်ကွင်းမှအနည်းဆုံး ၂၁၀၃ အထိဖုံးကွယ်ထားရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး
ဆံပင်အလှကုန်သမားများထွန်းကားလာခြင်းနှင့်အတူ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ဆံပင်သည် ဦး ထုပ်များထက် ပို၍ ဖက်ရှင်ကျလာသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ၁၉ ရာစုရိုးရာထုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်စည်ထည်ချုပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်သည်။ စျေးကွက် ၀ ယ်လိုအားသည် ဦး ထုပ်များကိုအပန်းဖြေကိရိယာများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်တစ်ကြိမ်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲအပန်းဖြေကိရိယာအဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဦး ထုပ်စျေးသည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလီယံခန့်ရှိသည်ဟုစျေးကွက်သုတေသနကုမ္ပဏီ Euromonitor မှဒေါ်လာ ၅၂ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ကိုင်အိတ်၏စျေးကွက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ တက်ကြွသောဖက်ရှင်မြို့တော်အပြင်ဘက်တွင် ဦး ထုပ် ၀ ယ်လိုအားမှာမြင့်တက်နေသည်။
ဒီဇိုင်းနာ ​​Priscilla Royer ၏အဆိုအရ "ဦး ထုပ်သည်လူတစ် ဦး ၏ silhouette နှင့်သဘောထားကိုပင်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ရူယာသည်ခေတ်သစ်ကိုစိတ်ဝင်စားသည်" တစ်ချိန်က ဦး ထုပ်ခံစားခဲ့ရသောထုံးတမ်းဓလေ့ကိုလူမှုဖူလုံရေးပုံစံ၌ချိုးဖျက်ရန်ကြိုးစားခြင်း။ ဦး ထုပ်အများစု၏ပြproblemနာမှာ၎င်းတို့နှင့်အတူသွားလာရန်မလွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်အဝတ်အစားများနှင့်စလစ်များကဲ့သို့သောပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သူမရဲရင့်တဲ့စိတ်ကူးရှိခဲ့တယ်။ ထီးများအစား ဦး ထုပ်များမည်သို့နည်း။ silhouette ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းမှပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းအထိသူမသည် tiara ဝတ်ဆင်ခြင်းကိုအလွန်နှစ်သက်သည်။ "လူမှုဗေဒအရ၎င်း၏စွမ်းအားသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ "
post အချိန်: ဇွန် -11-2021
Shandong Surmount Hats Co. , Ltd.